सन्तोषले भने ‘मलाई माया गर्ने महिला मेरो जिवनमा आइसकिन्’ काे हुन् ती महिला? (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > सन्तोषले भने ‘मलाई माया गर्ने महिला मेरो जिवनमा आइसकिन्’ काे हुन् ती महिला? (भिडियो हेर्नुस्)
सन्तोषले भने ‘मलाई माया गर्ने महिला मेरो जिवनमा आइसकिन्’ काे हुन् ती महिला? (भिडियो हेर्नुस्)
admin February 2, 2020 भिडियो, समाज	0
काठमाडौं । चितवनका सन्तोष र प्रमिलाको विषयमा केही दिन यता निकै चर्चा भयो । साउदीमा वर्षौसम्म दुख गरेर कमाएको पैसा समेत लिएर प्रमिला अर्कौ पुरुषसंग हिडेपछि निकै दुखी बनेका सन्तोषको जिवन अब फेरीएको छ । हराएको ३५ दिन पछि उनले प्रमिलालाई फेला पारेका थिए । अहिले प्रमिला सुनार प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रमिलाले दोस्रो विवाह गरेर गएकी अर्का पुरुष पनि हिरासतमै छन् । सन्तोषले वहुविवाहको मुद्दा हालेपछि उनीहरु प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन् ।
हिरासतमा रहेकी प्रमिलाले एक पटक सन्तोषलाई भेट्न चाहन्छु भनेर सन्देश पठाएकी थिइन् । तर सन्तोषले अब प्रमिला आएर आफ्नो ढोका अगाडी आ त्म ह त्या गर्छु भनेपनि स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । सन्तोषले आफ्नो जिवनको ठूलो कुरा खुलाएका छन् । प्रमिलाले धोका दिएपछि उनको जिवनमा नयाँ प्रेमी आएको पनि खुलाएका छन् ।
उनले आफुलाई माया गर्ने अर्को ब्यक्ति पनि विदेशमै भएको बताएका छन् । प्रमिलाले दिएको दुखका कारण मिडियामा रुँदै हिडेका सन्तोषलाई विदेशमै रहेकी अर्की महिलाले माया गर्छु भनेको उनले खुलाएका छन् । उनले ति महिलाको नाम भने अहिले खुलाएनन् । भने, अहिले त्यो कुरा खुलाउँदिन पछि त्यो मायामा सफल भएभने मिडियाका सामु खुलाउने छु ।
उनले अब आफ्नो जिवन खुसीसाथ अघि बढाउने बताएका छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई अब आमाको कमि हुन नदिने बताएका छन् । उनले आफ्नो नयाँ जिवन सुरु गर्दा सबैलाई खबर गर्ने बताएका छन् । उनले आफुलाई मन पराउने मानिस पाइसकेको छु भन्ने जानकारी दिँदै उनले प्रमिला तर्फ आफुले कुरा टुंग्याएको बताए । उनले आफुले अर्कै पुरुषसंग देखेका कारण स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।
जतिबेला प्रमिला कोठामा एक्लै बसेको देखेको भए प्रमिलालाई नै स्वीकार्ने सम्भावना हुन्थ्यो तर अर्कै पुरुषसंग एक महिना भन्दा लामो समय बसेर हिरासतमा समेत पुगेकी श्रीमतीलाई अब स्वीकार गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
पैसा कमाउन कोरिया पुगेका तनहुँका नरबहादुर मेसिनले थिचिएपछि कहिल्यै नफर्कने गरि अस्ताए…
कुवेतमा महिलाद्वारा आफ्नै प्रेमीको हत्या भएको नजिकै रहने साथीले यसरी गरे पर्दाफास – भिडियोमै हेर्नुहाेस्